Ipholiyesta Bag Factory | China Abenzi bePhepha lePolyester, abaXhasi
Ihowuliseyili ibhegi ibhegi ipokotho yefashoni yomqhaphu ibhande ...
Isiko le-Plain Strip Backpack 420D 210D Polyester Drawstring Gym Bag NgeLogo
Singumthengisi weengxowa ze-eco zobuchwephesha e-china kunye nangaphezulu kweminyaka eli-10 ukusukela oko sathengisa iimveliso zokuqala zesiko, iimveliso zethu zelayini ukuya kwisingxobo esingalukwanga, ibhegi yomqhaphu we-canvas, ibhegi epholileyo egalelweyo, g, ibhegi yomtya kunye nokunye.
Ihowuliseyili logo ubhaka ezemidlalo wenayiloni ipholiyesta ibhegi umtya kunye nezinto ezinokusetyenziswa
Singumthengisi weengxowa zobungcali e-china kunye nangaphezulu kweminyaka eli-10 ukusukela oko sathengisa iimveliso zokuqala zesiko, iimveliso zethu zelayini ukuya kwisingxobo esingalukwanga, ibhegi yomqhaphu ngelaphu, igqunyiwe ibhegi epholileyo, g, ibhegi yomtya kunye nokunye.
Ihowuliseyili yokuthengisa ilogo yokutsala ibhegi, ibhegi ephothiweyo yeplastiki
1. Ingxowa yeDrawstring ehlala ihleli, ubungakanani, umbala, kunye nelogo zingenziwa ngokwezifiso;
2. Uyilo lwefashoni ngokuvalwa komtya kunye nomtya owomeleleyo wamagxa, olungele ukuhamba, ipati, ukuya ezivenkileni, esikolweni njl.
3. Izinto ezinobungozi kokusingqongileyo, akukho monakalo emzimbeni womntu kwaye zinokuphinda zisetyenziswe.
I-grey ipholiyesta inyanda epokothweni imbaleki elula ubhaka isampula
I-Creative Nautiloop Eco-friendly Roll Up Reusable Polyester Foldable Shopping Bag
-Eco-Inobuhlobo, iyaphatheka, uyilo olumbeneyo
-Tsala ithegi ukukhupha ibhegi yokuthenga
-Ukulula ukuphatha, ukugcinwa okusongekayo
-Ukunika enye into ebiza ixabiso eliphantsi, eco-friendly kwezinye iibhegi zetotile yakho endaweni yamaphepha kunye neeplastikhi eziza kuhlala ixesha elide. Isisombululo esikhulu kubomi bemihla ngemihla
Iziganeko 210T yokukhuthaza rpet ezikhanyayo elungelelanisiweyo logo ubhaka RPET ngokutsha polyester ibhegi yokuthenga gym
China mveliso yokuqala yokuthengisa eshushu yokunyusa ipholiyesta emnyama ibhegi yobhaka